“ Wadahadal Caadaadis Nagulama Saari Karo…” Madaxweynaha Iran | Saxil News Network
“ Wadahadal Caadaadis Nagulama Saari Karo…” Madaxweynaha Iran
June 2, 2019 - Written by cali abdilaahi
USA (Saxilnews.com):- Madaxweyne Hassan Rouhani ayaa soo jeediyay in laga yaabo in Iran ay dooneeyso in ay wadahal la yeelato Mareeykanka waa haddii ay ixtiraam US muujiso, balse waxa uu sheegay in aanan cadaadis lagu saarin karin wadahalka.
Iran iyo Mareykanka ayaa bilihii ugu dambeeyay qarka u saarnaa iska hor imaad, sannad kadib markii Mareykanka uu ka baxay heshiis caalami ahaa ee u dhaxeeyay Iran iyo waddamada awoodda leh ee caalamka kaasi oo lagu xaddidayay mashruuca niyukleerka ee Tehran, waxaana markaasi Iran laga qaaday cunaqabteenadii saarnaa.
Washington ayaa sannadkii hore dib ugu soo rogtay cunaqabteenada waxa uuna Mareykanka dhammaan waddamada kale ugu baaqay in ay joojiyaan shidaalka dalka Iran looga soo dhoofiyo.
Toddobaadyadii ugu dambeeyayna Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in ay suuragal tahay iska hor imaad milatari ee labada dal kaasi oo sheegay in ciidamo dheerad ah uu u dirayo bariga dhexe.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in heshiiskii niyukleerka ee sannadkii 2015-kii usan ahayn mid aan aad loo adkeeynin waxa uuna Iran ku khasbayaa in ay heshiis cusub galaan.
Qaar ka mid ah saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ay suuragal tahay in ay biloowdaan wadahadallo cusub oo u dhaxeeya Mareykanka Iyo Iran.
Trump ayaa Isnintii sheegay in Iran ay heysato fursaddii ay marlbaad ku noqon lahayd waddan quwad leh iyadoo ay weli hoggaanka u hayaan isla madaxda haatan joogto.
Gudoomiyaha maxkamadda ugu sareysa dalkaasi Ayatollah Ali Khamenei ayaa Arbacadii sheegay in Iran ay wadahal la gali doonin Washington inkastoo Rouhani mar sii horeeysay ka dhawaajiyay in wadahadal uu suuragal yahay waa haddii cunaqabateenada laga qaado.